Wararkii ugu dambeeyay Shirka Muqdisho iyo Heshiis Hordhac ah oo lagu gaadhay | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Wararkii ugu dambeeyay Shirka Muqdisho iyo Heshiis Hordhac ah oo lagu gaadhay
Muqdisho ( Kalshaale ) Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka Furmay shirka u dhaxeeya madaxda Fedaraalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, Waxaana la sheegay in la isku raacay in shirka soo socda la ballaadhiyo.
Heshiiska hordhaca ah ee la gaadhay ayaa waxaa ka mid ah in furitaanka shirka soo socda ay ka soo qeyb galaan Guddoomiyeyaasha labada Aqal ee Baarlamaanka, Madaxweynayaashi hore, Ra’iisul Wasaarayaashii iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Qodobada laga heshiiyay ayaa waxaa ay ka mid ahaayeen shuruudo ay hore ugu xidheen shirka Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Saciid Deni iyo Axmed Madoobe.
Shirka maanta waxaa ka qeyb galay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Raysal wasaare Maxamed Xuseen Rooble, guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir iyo dhamaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka.
Dhawaan ayay aheyd markii Beesha Caalamka aay ugu baaqeen dhinacyada isku mari la’ khilaafka doorashada dalka iney xal rasmi ah ka gaaran khilaafkooda ka hor bisha barakeysan ee Ramadaan.
Short URL: https://kalshaale.ca/?p=42043
1 Comment for “Wararkii ugu dambeeyay Shirka Muqdisho iyo Heshiis Hordhac ah oo lagu gaadhay”
April 7, 2021 - 3:46 pm
ilaa uu dhinac noo dhaafo Macangag Farmaajo
lama aaminikaro Qowlkiisa iyo balantiisa
Hadduu rabo barito ayuu dhihukaraa kama jiro
Oo SACIID Deni ayaa soo MAD MADOOBEYSTAY
Maskixiyan maahan stable marka waa inaan
Tooshka laga dulqaadin ilaa laga saari Villa Xoriyo
* Masku kuma baxo na dhaaf